Ngokuphelele Awe.sm Social Media Analytics | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 19, i-2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Uma kukhulunywa ngokukhangisa kwezokuxhumana, analytics ngumshintshi womdlalo. Ngaphandle kwe- analytics kuba sekungenakwenzeka ukunquma ukuthi imiphi imikhankaso ephumelele, iqondiswe kuphi imali yesikhangiso, nokuthi yini exhuma namakhasimende. Noma kunjalo analytics ngenxa ye analytics akusizi ngalutho. Yilabo kuphela abachaza ukuthi ukungenelela kwemithombo yezokuxhumana kulengeza kanjani inani noma kuholele ekuguqulweni kunendaba.
Awe.sm wenza ukumaketha kokusebenza kwemithombo yezokuxhumana. Ithuthukisa imithombo yezokuxhumana analytics "nokuqonda okusebenzayo," okuvumela amabhizinisi nabathengisi ukuthi bathole impendulo ecacile futhi elinganisiwe emibuzweni enjengokuthi ngabe umkhankaso wezokuxhumana ukhiqize ukuchofoza kuwebhusayithi, ukuthi kungaki okuchofoziwe okuguqukile, inani lokuguqulwa okunjalo, nokuningi.
i-awe.sm yipulatifomu ehamba phambili yezinkampani zokusebenzisa idatha yezenhlalo. Sikala ukuthi ukumaketha kwezenhlalo njengokufana nokuthunyelwe kwe-Facebook nokubuyekezwa kwe-Twitter kuholela kanjani emiphumeleni ezuzisayo, njengokungena ngemvume, ukuthenga, nezinye izinhloso zebhizinisi
Nayi ingxoxo eyenziwe nguScobleizer ekhombisa Awe.sm ne-VIPLi.st, uhlelo lokusebenza olusebenzayo olubonisa amakhono e-Awe.sm:
I-Awe.sm inikeza ithuluzi lokushicilela, noma ungalihlanganisa nokugeleza komsebenzi okukhona. Ilandela okuthunyelwe ngakunye kwezokuxhumana ngakunye futhi inikeze imininingwane eningiliziwe njengesiteshi, isikhathi sosuku, ukuthumela imiyalezo, okuqukethwe nokuningi. Ihlangana ne-Google Analytics futhi inikeze ne-Return ekutshalweni kwemali yezokuxhumana uma kuqhathaniswa nezinye iziteshi zokumaketha.
Amamethrikhi ezinga ngalinye le-Awe.sm avumela ukuqhathanisa okulula ukuthola izinhlanganisela ezichofozayo. Isibonelo, abantu bangabhalisela umcimbi othunyelwe. I-Awe.sm ibhola phansi futhi ithole ukuthi i-tweet noma i-tweet kabusha, noma okuthunyelwe ku-Facebook noma okwabiwe ku-Facebook kwenziwa ngabantu abasayine. Futhi, imibiko idlulela ngale kokumane uqophe ukuthandwa noma amasheya, futhi inikeze izinyathelo noma inani ngokwezimali.
I-Awe.sm inikela ngezinhlelo ezintathu ezihlukene: uhlelo lomuntu siqu lwephrojekthi eyodwa, uhlelo oluvumela ukuphathwa kwamaphrojekthi ayishumi ahlukene ngasikhathi sinye nohlelo lwebhizinisi oluvumela ukuphatha inani elingenamkhawulo wamaphrojekthi ngasikhathi sinye. Uhlelo lwebhizinisi lunikeza inketho yokulandelwa kokusebenza kokuxhumana komphakathi ngokuphelele kufaka phakathi izinsizakalo ezengezwe njengama-URL wangokwezifiso, imibiko ehlelwe ngokwezifiso, amandla okuhlanganisa idatha ye-awe.sm emibikweni yangaphakathi nokuningi.
Tags: izibalo apiApiukwesaba.smrobert scobleanalytics media socialzokuxhumana apivipli.st
UJun 20, 2012 ngo-5: 35 AM
Izibalo zokumaketha ezokuxhum ziyindlela enhle yokwethula ukuthi iziteshi zenhlalo zidlala kanjani indima ebalulekile ekulandeleni isayithi lakho…